Zviratidzo zvekuti Apple Watch 2 iri padhuze | Ndinobva mac
Zviratidzo zvekuti Apple Watch 2 iri padhuze
Isu tatova pakati paNyamavhuvhu uye tichava nemavhiki anopfuura maviri nehafu kubva kuApple tichipemberera Keynote yaro inotevera, Keynote ichave inozivikanwa zvikuru uye ndezvekuti zvachose tichaziva zvigadzirwa zvitsva. iyo kambani yeiyo yakarumwa apple yakagadzirira mushandirapamwe weKisimusi. Zviri pachena kuti tichaona iPhone nyowani uye zvese runyerekupe zvinoratidza kuti ichauya kubva paruoko rweyatsva Apple Watch 2 uye ndezvekuti inguva, mushure memwedzi gumi nematanhatu yekutanga US, kuvandudzwa.
Nhasi chiratidzo chitsva chinomhanya kuburikidza nemambure enetiweki anonongedzera kuchokwadi chekuti chirongwa chekutanga cheApple Watch 2 chiri kutoenderera uye ndimo mamiriro ezvinhu atichazokuudza ari kutora nzvimbo. kwete pane webhusaiti yeSpain chete asiwo kuUS nedzimwe nyika.
Iko stock yemazhinji emaApple Watch mamodheru muzvitoro izvi paIndaneti inoita kunge yatengeswa kunze, izvo zvinoratidza kuti avo vanobva kuCupertino vari kupererwa nesitendi yazvino Apple Watch kugadzira nzira yechigadzirwa chitsva chichauya, pakati pezvimwe zvinhu, ne inokurumidza processor, hwakareba hupenyu hwebhatiri, GPS uye barometer. Chingave chekutanga chikuru kuvandudzwa kweApple Watch, iyo kunyangwe isina mufananidzo wakadururwa wekuti dhizaini yayo ingave isati yaitika, zvese zvinoratidza kuti tichava nazvo nesu chaizvo, munguva pfupi iri kutevera.
Mune chinyorwa chakapfuura takakuudza kuti Apple ingadai isiri kungoshanda pane iyo nyowani Apple Watch 2 asi yaizovandudza zvakare Hardware yeApple Watch 1, kuitira kuti kubva munaGunyana mamodheru maviri agare pamusika. Chingave chirongwa chitsva che Marketing Izvo zvaizoita nzira dzese dzavaishandisa kugadzira nekugadzira iyo modhi yekutanga inoramba ichishandiswa kwemwedzi gumi nembiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zviratidzo zvekuti Apple Watch 2 iri padhuze
Apple inoburitsa yechitanhatu beta yeTVOS 10 yevagadziri
Apple Inoburitsa XNUMXth MacOS Sierra Beta yeVagadziri / XNUMXth Veruzhinji Beta